Qabka Farmaajo sheego ma in qaranka Abiy la hoos geeyaa? | KEYDMEDIA ENGLISH
Qabka Farmaajo sheego ma in qaranka Abiy la hoos geeyaa?
Wareysiga wuxuu Wasiir Maxamed Cabdirisaaq, ku xusay in waraaqda xilka looga qaaday ay ka timid xaafiiska Farmaajo, lana soo dhex marsiiyay xaafiiska Ra’iisul Wasaaraha, wuxuuna hadalkiisa u dhigay in Farmaajo yahay [Koran] ka amar qaata Abiy Axmed.
MUQDISHO, Soomaaliya – Wasiirkii hore ee Arrimaha Dibadda Soomaaliya, Maxamed Cabdirisaaq Maxamuud Abuubakar, oo bixiyay wareysi dhinacyo kala duwan taabanaya oo la xariira dhacdooyin dhacay intii uu xaafiiska joogay, ayaa sheegay in Itoobiya ay Farmaajo ku amartay in diyaarad nuuceedu yahay C-130 oo ay leedahay Masar aysan ka soo degi karin Muqdisho.
Mar la weydiiyay in inuu xilkiisa ku waayay dadaallo ay Egypt ku doonaysay in ay ciidan ku geyso Soomaaliya, si la mid ah dalalka kale ee ciidamadu ka joogaan dalka, ayuu ku jawaabay in eeddaas aysan waxba ka jirin, isla-markaana Masar intii Wasiirka ahaa aysan codsan in ay ciidan geyso Soomaaliya.
Hayeeshee, wuxuu su’aashaas u dhigay si kale, isagoo sheegay hadal u muuqda inuu qoonsaday, sabab la xariirta muran ka dhashay daawo ay Jaamacadda Carabta ugu deeqday Soomaaliya oo diyaarad Masar leedahay ay keeni lahayd dalka, taas oo ay diiday dowladda Itoobiya.
Wuxuu Farmaajo iyo Kooxdiisa ku eedeeyay in qabkooda Soomaalinimo gaarsiisneyn, heer madax-bannaan oo Itoobiya iyo xaafiiska Abiy Axmed, ka amar qaataan, wuxuu su’aal galiyay sababta ay Itoobiya u diidday in diyaarad ka socota Egypt timaaddo Muqdisho?, waxa ka galay duulimaadyada Soomaaliya? iyo sababta uu Farmaajo u qaatay amarka Abiy?.
“Markii Jaamacadda Carabta ay na siisay deeq la xariirta, daawooyinka COVID iyo qalabkeeda, Masar ayaa noo ballan qaadday in ay noo soo qaadeyso, waxay noo soo direen xogta daawada diyaaradda wadda, meesha ay soo mareyso, kooxda la socota, waqtiga ay Muqdisho ku soo degeyso iyo faahfaahinta oo buuxda”. Ayuu yiri Maxamed Cabdirisaaq.
“Qof Soomaali ah sidey macquul u tahay in la yiraahdo, Masar la hadal oo diyaaradda Cargo-ga ah ee C-130, la yiraahdo ma rabno, [Yeysan daawada noo soo qaadin] ee diyaarado kale ha noogu soo daabulaan?, Waa laga jawaabi waayay su’aashaas”. Ayuu ku sii daray.
Wuxuu sheegay markii uu weydiiday sababta sidaas loo sameynayo, in lagu wargaliyay in Dowladda Itoobiya aysan ogoleyn in diyaarad Military, gaar ahaan nuucda [C-130] oo laga leeyahay Qaahira, in ay timaadddo Soomaaliya.
“Daawo Jaamacadda Carabta bixisay Masarna ay diyaarad soo saartay oo Soomaaliya loo wado Itoobiya maxaa ka galay? Waxaa nugu jira dad laga dilay qabka iyo giisinnimadii Soomaaliyeed”. Ayuu mar kale is weydiiyay Wasiirkii hore ee Arrimaha Dibadda.
Madaxweynihii hore, wuxuu muddo ku celcelin jiray inuu dib u soo nooleeyay qabkii Soomaaliya, hayeeshee, ku dhawaad shan sano kadib markii uu xilka qabtay , Wasiirkii Arrimaha Dibadda ayaa sheegaya in siyaasadda Soomaaliya Farmaajo hoos geeyay xaafiiska Abiy Axmed.